Kufsi ay ciidanka Kenya ka geysteen Gedo oo la baarayo
KISMAAYO, Soomaaliya - Kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamadda Kenya ay Kufsi wadareed ay ka geysteen tuulooyin hoos-yimaada Magaalada Belad-xaawo ee gobolka Gedo, taasoo Shacabka iyo Xilldhibaanada Federaalka kicisay ayaa waxaa war kasoo saaray maamulka Jubbaland.
Wasiir ku xigeenka Wasaarada arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Jubbaland C/raxmaan Maxamed Xuseen ayaa daboolka ka qaaday inay arrintaan ay kala hadleen dowladda Kenya, islamarkaana ay ubalansan yihiin kulamo kale.
Wuxuu carabka ku dhuftay in saraakiil ka socotay xukuumadda Nairobi iyo maamulka Jubbaland ay kulmi doonaa maalmaha soo socda, si loo bilaabo olale ka dhan ah Askarta Kufsiga lagu soo eedeeyay, islamarkaana loo horkeeno cadaaladda.
Wasiir ku xigeenka ma uusan sheegin waqtiga uu kulanku dhici doono, iyo hadii Ragga askarta Kenya ka tirsan ee Kufsiga lagu soo eedeeyay la aqoonsaday, inkasta oo la tilmaamay in kuwa wax Kufsday ay yihiin ciidamadda aan ka tirsaneed howlgalka AMISOM.
"Shacabku waa inay is-dejiyaan. Maamulka wuxuu diyaar uyahay inuu qaado talaabo walba oo uu wax uga qabanayo arrintaan. Waxaana doonaynaa inaan si daacad ugala hadalno masuuliyiinta Kenya," ayuu Wasiir ku xigeenka ku daray hadalkiisa.
Wuxuu shaaca ka qaaday in saraakiisha Kenyan-ka ah iyo kuwa maamulka Jubbalanad ka socda ay si wadajir ah u bilaabi doonan baaritaano la doonayo in lagu soo aqoonsado Askarta Kufsiga ka dambeysay, si ciqaabta ay mudan yihiin loo marsiiyo.
Dhibaato isugu jira Dil ola kac ah, burburinta hanti shaqsiyadeed iyo Kufsi ayaa kamid ah tacadiyo la sheegay in ciidamadda Kenya ay ka geystaan degeegaanada xuduudka ku teedsan, waxaana masuuliyiinta Soomaalida lagu dhaliilay inay ka gaabiyeen sidiii wax looga qaban lahaa.
Xildhibaanno katirsan labada golle ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa dhawaan war kasoo saarey tacadiyada iyo kufsiga ay Ciidamada Kenya ka geysanayaan Gedo. [Halkan ka akhri Warka].
Duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka Gedo [Fahfaahin]
Soomaliya 31.07.2018. 11:47
Hogaamiye-yaal sare oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu beegsaday weeraro ay dalka...
Soomaaliya: Xiisad ka taagan Balad Xaawo iyo rasaas la maqlay
Soomaliya 24.03.2018. 11:31